ISHIISA LAGA GARTAA USHIISA LAGU TUMAA _ Imisa gool ayaa kooxda Barcelona ilaa iyo haatan xili citaareedkan laga dhaliyay? – Gool FM
ISHIISA LAGA GARTAA USHIISA LAGU TUMAA _ Imisa gool ayaa kooxda Barcelona ilaa iyo haatan xili citaareedkan laga dhaliyay?
(Barcelona) 05 Okt 2018. Waxaa haatan iska cad in Barcelona ay dhibaato ka heysato qeybta dambe ee difaaca xili ciyaareedkan, kadib musiibooyinkii ay Blaugrana kala soo kulantay 10-kii kulan ay ilaa iyo haatan ka soo ciyaareen xili ciyaareedkan 2018/2019.
Kooxda Barcelona ayaa ilaa iyo haatan laga dhaliyay 11 gool, 10-kii kulan ay kasoo ciyaareen dhamaan tartamada kala duwan, 8 gool waxaa loogaga dhaliyay 8-dii kulan ay kasoo ciyaareen horyaalka La Liga, halka 2 gool looga dhaliyay tartanka Champions League iyo 1 gool ee ah koobka Spanish Super Cup.
Difaaca kooxda Barcelona ayaa laga dhaliyay 10 gool 6-dii kulan ugu dambeesay ay xili ciyaareedkan ka ciyaareen dhamaan tartamada kala duwan xili ciyaareedkan.
Wargeyska reer Spain ee “Sport” ayaa shaaca ka qaaday in Ernesto Valverde uu bilaabay inuu raadiyo qorsho difaaceed adag ay yeelaneyso kooxda Barcelona, taasoo ku riiixeysa in uu khadka dhexe u adeegsado laba ciyaaryahan ee kubad burburiyayaal ah wuxuuna ka guuri doonaa qorsho ciyaareedka ah 4-3-3, isaga oo u guuri doona 4-4-2.
Barcelona ayaa iska lumisay dhibco badan, xili ay guuldaro lama filaan ah ee 2-1 ah ay kasoo gaartay kooxda Legianis, waxayna sidoo kale barbaro la galeen kooxda Athletic Bilbao.
Xidigaha Manchester United oo aaminsan in ay muhiim tahay in Jose Mourinho uu ka dhaqaaqo garoonka Old Trafford